03/13/13 ~ Myanmar Forward
Posted by drmyochit Wednesday, March 13, 2013, under ဓါတ်ပုံသတင်း | No comments
လက်ပံတောင်းတောင်စုံးစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်၏ အစီရင်ခံစာကိုမကြေနပ်သဖြင့် ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေသည့် ရွာသွားများကိုတားဆီးထားသည်လုံခြုံရေးများ
မှတ်ပုံတင်မရှိသဖြင့် နာဂတို့ အသံပျောက်
Posted by drmyochit Wednesday, March 13, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
မှတ်ပုံတင် မရှိ သဖြင့် နာဂ တိုင်းရင်း သားများ၏ အခွင့် အရေး များနှင့် လူဦးရေ ဆုံး ရှုံးမှု ကြီးကြီး မားမား ကြုံတွေ့နေ ရသည်ဟု ရန်ကုန် နာဂကျောင်း သား လူငယ် အဖွဲ့ချူပ် (ဥက္ကဌ) ဦးနော်အောင်ဆန်းက မတ်လ ၁၁ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ် ခဲ့သော သတင်းစာ ရှင်းလင်း ပွဲတွင် ပြောခဲ့သည်။
“ တောင်တန်းမှာ နေတောင်တန်းမှာပျော် မြို့နဲ့ ဘာမှမဆိုင်ဆိုတဲ့ ပုဂိုလ် များဖြစ်ကြတဲ့ နည်းတူမှတ်ပုံတင် ဆိုတာ အရေးမကြီးပါဘူး ဖြစ်ကြတဲ့အတွက် အခုချိန်မှာ လူဦးရေ ဆုံးရှုံးမှု ကြီးကြီး ကျွန်တော်တို့ ကြုံတွေ့နေ ရပါတယ်” ဟု ဦးနော်အောင်ဆန်းက ပြောသည်။
Posted by drmyochit Wednesday, March 13, 2013, under သတင်းများ | No comments
Photo: ထိုင်း အာဏာ ပိုင်တွေ ထိန်း သိမ်းခြင်း ခံရတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခ သည်များ (ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၃)
ရိုဟင်ဂျာ လှေစီးပြေး ဒုက္ခသည် တစုကို ထိုင်းရေ တပ်က ပစ်ခတ် တာကြောင့် လူနှစ်ယောက် ထက်မ နည်း သေဆုံး သွားတယ် လို့ စွပ်စွဲ ထား တဲ့ဖြစ်ရပ် အတွက် စုံစမ်း စစ်ဆေးဖို့ လူ့ အခွင့် အရေး စောင့်ကြည့် လေ့ လာရေးအဖွဲ့က တောင်းဆို လိုက်ပါတယ်။
အစီရင်ခံစာ အပေါ် ၀မ်ဘောင် သဘောထား ထုတ်ပြန်
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင် အစီရင်ခံစာ အပေါ် မြန်မာ ၀မ်ဘောင် မိုင်းနင်း ကော့ပါး လီမိတက် မှ သဘောထား ထုတ်ပြန်ရာမှာ အစီရင်ခံ စာမှာ ထောက်ပြ ထားတဲ့ အချက်တွေကို လိုက်နာဆောင်ရွက် မယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ --
Posted by drmyochit Wednesday, March 13, 2013, under ဆောင်းပါး | No comments
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လနဲ့ အောက်တို ဘာလတွေ မှာ မြန်မာနိုင် ငံ ရခိုင်ပြည် နယ်မှာ နေထိုင်ကြတဲ့ ဌာနေ ရခိုင်လူ မျိုးတွေ နဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေကြား မှာ ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွား မှုတွေ ရှိခဲ့ပါ တယ်။ အဲဒီလို ပဋိပက္ခဖြစ် မှုတွေနဲ့ အတူ နိုင်ငံ တကာက လည်း မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ရခိုင် လူမျိုးအပေါ် ပိုမို အာရုံ စိုက်လာ မှုတွေ ရှိခဲ့ ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် 'ရိုဟင်ဂျာ' ဆိုတဲ့ စကား လုံးမှာလည်း ရခိုင်နှင့် သမိုင်း ပညာရှင်တွေကြား ထဲမှာ မေးခွန်း ထုတ်စရာ မလိုဘဲ ကျယ်လောင် လာတဲ့ စကားလုံး တစ်ခု ဖြစ်လာ ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ အချိန် မှာပဲ ထိုင်းနိုင်ငံရောက် ရခိုင် လူမျိုးတွေ က ထိုင်းနိုင်ငံ မဟီဒေါ တက္ကသိုလ်မှာ ပြုလုပ်မယ့် ရခိုင် သမိုင်း ဆိုင်ရာ နိုင်ငံ
မတ် ၁၃ ရက်၊၂၀၁၃
ထိုင်းနိုင်ငံ ကန်ချနဘူ ရီမြို့တွင် “စို့ကျိုင်း” အ မည်နှင့် ဖွင့် လှစ် ထားသော အငှား တိုက်ခန်း တခုတွင် ရောင်းစား ခံရပြီး လိင်ဖျော်ဖြေရေး အ လုပ် လုပ်ခိုင်း ခံနေ ရသည့် အသက် ၁၈ နှစ် မပြည့်သော မြန်မာ မိန်းကလေး ၈ ဦးကို ထိုင်း အာဏာ ပိုင် များက ယမန်နေ့က ကယ်တင် လိုက်ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
တသက်လုံး ဒေါ်စုကို ချီးမွမ်းရေးသားခဲ့သော ဗြိတိန်မှ သတင်းစာများ ဒေါ်စုကို ဝေဖန် အပြစ်တင်ရေးသားမှုများ စတင် လုပ်ဆောင်လာ
ကော်မရှင် အစီရင်ခံစာထွက် ပြီးသည်.နောက် တနိုင်ငံ လုံးက ပြည်သူတွေ က သူမကို အလွန်ဒေါသ ထွက်စိတ်ဆိုးနေ တဲ. အရှိန် ထိုးတက် လာခဲ့တာ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေ စီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ် စု ခု သိသွားပါပြီ။
သူမကြီးမှုးတဲ. ကော်မရှင်အဖွဲ.ဟာ ဆန္ဒပြသူ အများအပြားကို ထိခိုက် ဒဏ်ရာရအောင်လုပ်ခဲ.သူတွေကို အရေး ယူ ပေးဖို့ ပျက်ကွက် တဲ့အပြင်၊ လူတွေ အကြီးအကျယ် ကန့်ကွက်တဲ့ တစ်ဘီလီယံ တန်ဘိုးရှိ မုံရွာ ကြေးနီတောင် စီမံကိန်းကို ဆက်ခွင့် ပြုရမယ်လို့ တိုက်တွန်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ပံတောင်းတောင် စီမံကိန်း၌ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းသည် ယင်းဒေသ အကျိုးတစ်ခုတည်းအတွက် မဟုတ် ဘဲ နိုင်ငံ၏ အနာဂတ်ကို မျှော်ကိုး၍ လုပ်ဆောင် ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည် ပြော ကြား
လက်ပံတောင်းတောင် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပါဝင်ဆောင် ရွက်ခြင်း သည် ယင်းဒေသ အကျိုး တစ်ခု တည်း အ တွက် မဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံ၏ အနာ ဂတ်ကို မျှော် ကိုး၍ လုပ်ဆောင် ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဒေါ်အောင် ဆန်း စုကြည်က မတ်လ ၁၂ ရက်က ပြည်ထောင် စု
Posted by drmyochit Wednesday, March 13, 2013, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
ဓာတ်ခွဲခန်း အတွင်းရှိ ကြွက်များ ကို ဦးနှောက် တို့အား ကြိုးဖြင့် ဆက်သွယ်ပြီး အပြန်အလှန် အသိတုံ့ပြန်မှု တို့အား ဖမ်းယူ ရရှိပြီဟု ဘီဘီစီ သတင်းဌာနမှ ထုတ်ပြန် ခဲ့သည်၊ ကြွက်များ၏ ဦးနှောက်တွင် ဝါယာကြိုးကို တပ်ပြီးစမ်း သပ် ကြည့်ရာတွင် အာရုံခံ အချက်ပြလှိုင်းများဖြင့် signal များ ပို့လွှတ်မှုကို တစ်ကောင်နှင့် တစ်ကောင် ဖမ်းယူနိုင် ကြောင်းတွေ့ရသည်၊ ထိုတွေ့ရှိချက်သည် တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်နှင့်တစ်ကောင်
နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများနဲ့ တပ်မတော်(ကြည်း၊ ရေ ၊ လေ) ဝန်ထမ်းများရဲ့ လစာနှင့် စရိတ်နေ့စားလုပ်ခများကို ခေတ်ကာလ အခြေအနေနဲ့ ဆီလျော်မှုရှိစေရန် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တွင် လျာထားကြောင်း သမ္မတကြီး ပြောကြား
၁၂-၃-၂၀၁၃ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံတော် သမ္မတ အိမ်တော် အစိုးရ အဖွဲ့ အစည်း အဝေး ခန်းမ၌ ကျင်းပ သည့် ဘဏ္ဍာရေးကော်မရှင် (၁/ ၂၀၁၃) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးမှ ပြောကြားချက်
ယခု ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် နိုင်ငံတော်၏ ရသုံး ခန့်မှန်းခြေ ငွေစာရင်း (ပြည်ထောင်စုနှင့် တိုင်းဒေ သကြီး/ပြည်နယ်များ) အခြေအနေမှာ စုစုပေါင်း ရငွေ ကျပ် ၁၃၈၀၅.၃၈၇ ဘီလီယံ၊ စုစုပေါင်း သုံးငွေ ကျပ် ၁၆၇၃၂.၂၈၅ ဘီလီယံ ဖြစ်သဖြင့် လိုငွေကျပ် ၂၉၂၆.၈၉၈ ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်။ ဂျီဒီပီ တန်ဖိုး မှာ ကျပ် ၅၉၂၄၈.၉၅၃ ဘီလီယံဖြစ်သဖြင့်
ရခိုင်မှာ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ အတူ ယှဉ်တွဲနေ ထိုင်ရေး သံတမန်တွေ လိုလား
Posted by drmyochit Wednesday, March 13, 2013, under မြန်မာသတင်းများ | No comments
အမေရိကန် သံအမတ် ဒဲရစ်မစ်ချယ် အပါ အ၀င် ဗြိတိန် သြစတြေးလျက သံအဖွဲ့တွေ ပါဝင်တဲ့ အနောက် တိုင်း သံတမန်တွေဟာ လွန်ခဲ့ တဲ့ တစ်နေ့ကဘဲ စစ်တွေမြို့ကို ရောက်ရှိ လာပြီး ဒေသ အတွင်းက နိုင်ငံရေး ပါတီတွေ၊ လူမူ အဖွဲ့ အစည်း တွေ ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင် တွေနဲ့ တွေ့ဆုံပြီး ရခိုင် ပြည်နယ် အရေး ကိစ္စ တွေကို တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး သွားခဲ့ ပါတယ်။
အရေးအခင်းကြောင့် အိုးအိမ်မဲ့ခဲ့ရတဲ့ ရခိုင် ဒုက္ခ သည်တွေ
မဲဆောက်ရှိ အထည်ချုပ် စက်ရုံ မြန်မာ အလုပ် သမား ၁၈ ဦး ခြိမ်းခြောက် ခံရပြီး အလုပ်မှ ထုတ်ပယ် ခံရ
ထိုင်းနိုင်ငံ တာ့ခ်ခရိုင်၊ မဲဆောက်မြို့ မယ်တော်တာ့ ရပ်ကွက် အတွင်းရှိ အရပ်ခေါ် နဂါးနှစ်ကောင် အထည် ချုပ် စက်ရုံတွင် မြန်မာ အလုပ် သမား ၁၈ ဦးကို အလုပ်ရှင်က ခြိမ်းခြောက်ပြီး မတ်လ ၁၀ ရက်နေ့ ညနေပိုင်း တွင် အလုပ်မှ ထုတ်ပယ် လိုက် သည်ဟု သိရသည်။
အလုပ် ရှင်သည် အလုပ် သမား များအား သတ်မှတ် ထားသည့် လစာပေး ရက်တွင် အကြောင်း အမျိုးမျိုးပြ ကာ လုပ် အားခပေး ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ သဖြင့် အလုပ်
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီ စီမံကိန်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ စုံစမ်းရေး ကော်မရှင်ရဲ့ အစီရင် ခံစာနဲ့ အညီ လုပ် ငန်း ဖော်ဆောင်ရေး ကော်မတီရဲ့ ညွှန်ကြား မှုတွေကို ဦးပိုင်က လိုက်နာမှာ ဖြစ်တဲ့ အကြောင်း မတ်လ ၁၂ ရက်နေ့စွဲနဲ့ ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်မှုကို ယနေ့ ထုတ် နိုင်ငံပိုင် သတင်း စာတွေမှာ ဖော်ပြ ပါရှိ ပါတယ်။
မီးကျည်ဗုံး ထိမှန်ပြီး ဘယ်ဘက် မျက်လုံး ကွယ် သွားသော သံဃာ တစ်ပါး..
ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ အ၀ကျွန်း ငှက်ချေကုန်းဘုရား အလှူခံ သေတ္တာ အခိုးခံရ
ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့နိုင်ငံ ပါတ၀ါခါလီ ခရိုင် ကောလာ ပါ ရာ မြို့ နယ် အ၀ကျွန်း ဒေသရှိ ငှက်ချေကုန်း ဘုရား အလှူခံ သေတ္တာပုံးအား မသမာသူ တစ်စုက ခိုးယူ သွားကြောင့် ဒေသအတွင်းက လူကြီး တစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးဦးသာ စိန်က နိရဉ္စရာသို့ ပြောသည်။
အခမဲ့ သင်တန်းပေးသူကို ဘာကြောင့် တရားစွဲသလဲ
နိုင်ငံတော် သမ္မတက စွမ်းရည်မြင့်ရေး လုပ်ဆောင် ရန် လိုအပ် သည်ဟု ပြော နေသော မြန်မာ နိုင်ငံ တွင် စွမ်းရည် မြင့်ရေး သင်တန်း ဖွင့်သူတဦး တရား စွဲ ခံနေ ရသည်။
ပြည်မြို့နယ် အထွေထွေ အုပ်ရေးမှူးရုံးက ထိုမြို့ရှိ သံလွင် ခက် ပညာဒါနကျောင်းဖွင့်ထားသူ ကိုမင်း မင်း ကို ဥပဒေပုဒ်မ (၁၇၂) ဖြင့် တရားစွဲထား သည် ဟု ဆိုသည်။
နယူးယော့ခ်မှ ဆရာ၊ အပေါ်ပိုင်းဗလာပုံကြောင့် ကျောင်းထုတ်ခံရ
နယူးယော့ခ်မှ ကျောင်းဆရာတစ်ဦးသည် ကျောင်းမှ အီးမေးလ်ကို အသုံးပြုပြီး၊ သူ မော်ဒယ် ဘဝက ပုံများ ကို အခြား သူများထံ ပေးပို့ ခဲ့မှုဖြင့် ကျောင်းထုတ် ခံရကြောင်း သိရသည်။ အသက် ၃၂ နှစ်အရွယ်ရှိ မက်သရူး မာလင်းစကီး ဆိုသူသည် မော်ဒယ် ဘဝတွင် အရိုက်ခံ ထားသည့် အပေါ် ဗလာကျင်း ပုံများကို အခြား ဆရာ ၁၈၃ ဦးထံ ပေးပို့ခဲ့မှုဖြင့် ထိုသို့ အရေးယူခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် ရမ်းဗြဲမြို့ ကျောက်နီမော် ကျေးရွာတွင် ရေလုပ်သားများ ဘင်္ဂလီများ၏ အသက်အန္တရာယ်ပြု တိုက်ခိုက် မှုများ ရှိနေသဖြင့် ရေလုပ်ငန်းများ ထိခိုက်မှု ရှိနေကြောင်း သိရ သည်။ ကျောက်နီမော် ကမ်းခြေနှင့် ကျောက်ဖြူကမ်းခြေတို့တွင် ဘင်္ဂလီရွာများ နေထိုင်ကြပြီး အုပ်စုဖွဲ့ အနိုင်ကျင့်သတ်ဖြတ် လုယက်ကြ သဖြင့် ရခိုင်ငါးဖမ်းလှေများ ထိတ်လန့်နေကြရကြောင်း၊ ကျောက်နီမော် ကမ်းခြေရေပိုင်နက်ကို
ဟန်းဆက်တစ်လုံးဝယ်လျှင် နိုင်ငံခြားခေါ်ဆိုရ ဆင်းကဒ် အခမဲ့ထည့်ပေးမည်
မိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပတ် သက်ပြီး သမ္မတ ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိ သူ၊ ပြန်ကြားရေး ဒု ၀န်ကြီး ဦးရဲ ထွဋ်က သူ့ ရဲ့ ဖေ့စ် ဘုတ်စာ မျက်နှာမှာ ရှင်းပြထားသည့်ကိစ္စနှင့် ပတ် သက်ပြီး အများပြည် သူများ သို့လော သို့လော ဖြစ်နေပါတယ်။ သတင်းဂျာနယ်အချို့မှာ သမ္မတရုံး ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဦးစိုး သိမ်းက ဆင်းကဒ် များကို နှစ်သောင်း ကျပ်နဲ့ ရောင်းချပေး မယ်လို့ ပြောကြောင်း ကိုးကားရေး သားနေတာ
တသက်လုံး ဒေါ်စုကို ချီးမွမ်းရေးသားခဲ့သော ဗြိတိန်မှ ...
လက်ပံတောင်းတောင် စီမံကိန်း၌ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်း...
နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများနဲ့ တပ်မတော်(ကြည်း၊ ရေ ၊ လေ) ဝ...
ရခိုင်မှာ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ အတူ ...
မဲဆောက်ရှိ အထည်ချုပ် စက်ရုံ မြန်မာ အလုပ် သမား ၁၈ ဥ...
ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ အ၀ကျွန်း ငှက်ချေကုန်းဘုရား အလှူခံ သေတ္တ...
နယူးယော့ခ်မှ ဆရာ၊ အပေါ်ပိုင်းဗလာပုံကြောင့် ကျောင်းထ...
ကျောက်နီမော် ရေလုပ်သားများ ဘင်္ဂလီများရန် ကြောက်နေရ ...
ဟန်းဆက်တစ်လုံးဝယ်လျှင် နိုင်ငံခြားခေါ်ဆိုရ ဆင်းကဒ် ...